ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဂုဏ်သိက္ခာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး သမတ္တအကြံပေးရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဂုဏ်သိက္ခာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး သမတ္တအကြံပေးရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ…
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဂုဏ်သိက္ခာ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး သမတ္တအကြံပေးရဲ့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ…
Posted by ခေတ်သစ်ပေါက်ကျိုင်း on May 20, 2012 in Copy/Paste, Education, Myanma News | 14 comments
ပြန်လိုချင်တယ်...တစ်ချိန်တုန်းက တို့ တက္ကသိုလ်
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အစဉ်လာနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက် Myanmar Development Resource Institute -MDRI မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အရင်းအမြစ် အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံတော်သမတ္တအကြံပေးလည်းဖြစ်တဲ့ ဦးမြင့်က ပြည်သူထံသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ တစ်စောင် ဒိနေ့ ဖြန်ချီလိုက်ပါတယ်။
ပညာရေးကဏ္ဍ လိုအပ်ချက် အတွက် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့ အစဉ်အလာ ဂုဏ်သိက္ခာကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး အတွက် စဉ်းစားကြဖို့ စာမှာအဆိုပြုထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဆိုတာ ပြည်သူတရပ်လုံးက ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အမျိုးသား အမွေအနှစ်ဖြစ်ကြောင်း၊ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်းဦးကာလမှာ အာရှတိုက်က အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၊အကြီးအကျယ်ဆုံး တက္ကသိုလ်တွေထဲက တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း၊
အရင်က ရှိခဲ့တဲ့ ဂုဏ်ရောင်တွေနဲ့ အသွေးရောင်စုံတွေ လွင်ပြယ်ခဲ့ရတဲ့ အောကင်းတွေကို ပေးစာမှာ ဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ပင်မ၀င်းထဲက စာသင်ခန်းတွေမှာ ဘွဲ့ကြို၊ဘွဲ့လွန် ပုံမှန်အတန်းတွေ ပြန်သင်ကြားဖို့၊၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်ပိုင်းတွေကက စပြီး ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ကင်းမဲ့သွားတဲ့ အဆောင်တွေမှာ အဆောင်သူ၊အဆောင်သားတွေ ပြန်ထာထားဖို့ ကိုလည်း ရေးထားပါတယ်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ စာပြန်သင်နိုင်အောင် အဲဒီလို အဆိုပြုထားတဲ့အပြင် တက္ကသိုလ်ရဲ့ သမိုင်း၊လက်ရှိတက္ကသိုလ်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို ပြောဆိုရေးသား တင်ပြပေးဖို့နဲ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို အရင်လို ဂုဏ်သိက္ခာမျိုး ပြန်ရရှိဖို့ လုပ်ငန်းစီမံကိန်း ရေးဆွဲ အကောင်ထည်ဖော်ရေး အကြံပြုကြဖို့ကိုလည်း တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီလို အရင်က ဂုဏ်သိက္ခာ အတိုင်း ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးကိုလည်း ဦးမြင့်ရဲ့ ပေးစာမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီအဆိုကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။ ကိုလင်းဝေရေ…တက္ကသိုလ်ကျောင်းကြီး ပြန်လည် အသက်ဝင်လာအောင် မန်းဂေဇက်မှ နိုးဆော်ကြပါဆို့ခင်ဗျား….
ဒါမှလည်း မြန်မာပြည်ကဘွဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းလေးစားအထင်ကြီးနိုင်မှာပါ၊ နို့မဟုတ်ရင်တော့ မြန်မာပြည်က ရိုးရိုးဘွဲ့ရဆိုရင် သူများတိုင်းပြည်တွေမှာ အလုပ်ကြမ်းသမားများနည်းတူအလုပ်လုပ်နေရအုံးမှာပါပဲ။
ဘာမဟုတ်တဲ့ စင်္ကာပူလိုတိုင်းပြည်ကတောင် စားပွဲထိုး၊ပုဂံဆေး၊သန်ရှင်းရှေကို ဘွဲ့ရမှတဲ့ ရင်နာတတ်ရင် လဲသေဖို့ပဲကောင်းပါတော့တယ်။(ဒါတောင် ဒေး တက်ပြီးရတာဖြစ်ရမယ်)…
ဒို့နိုင်ငံ နောက်ကျကျန်နေတာကိုမြင်ရတိုင်း စစ်ခွေး Aလိုးကောင်တွေကိုသတ်ချင်တယ်
(ယခင် စစ်အာဏာရှင် ခွေးသူတောင်းစားများကို ရည်ရွယ်ပြီးပြောတယ်) ဒင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာမှာ အောက်ကျနေတာ
စာမျက်နှာ(၇)မျက်နှာပါတဲ့ စာကိုဖတ်လိုက်မိပါတယ်။ခုလို ပြန်အသက်သွင်းမယ်ဆိုတာ ကြား
ဒါမျိုးကို အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ် ….. ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးကိုလည်း ပြန်လည်အသက်ဝင်စေချင်တာ ကြာပါပြီ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပေမယ့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (မြကျွန်းညိုညို)မှာ မခိုလှုံခဲ့ ရတာ အရမ်းရင်နာတယ် …… ကိုလင်းဝေပို့စ်မှာတောင် စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့မိသေးတယ် ……. ကိုသုညရေ ဒါမျိုးသတင်းလေးတွေကို ရှယ်ပေးတာ ကျေးကျေးပါ ………
နောက်တစ်ခုက ဒေး / ဒစ်စတန့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို အစိုးရက သင့်တင့်သော (အပြင်ဆောင်တွေထက် မနဲလွန်း ၊ မများလွန်းသော ) လခနဲ့ အဆောင်ပေးသင့်ပါတယ်..။
အဆောင်မှုး အဆောင်ချုပ် စည်းကမ်းစနစ်တကျနဲ့ လွပ်လပ်စွာ နေခွင့်ရှိသော အဆောင်များ ဖြစ်စေချင်တယ်..
တက္ကသိုလ်မှာ ကျောင်းသူများ ကျောင်းသားများ ပျက်ဆီးရခြင်း အဓိက အကြောင်းရင်းတစ်ချက်မှာ အပြင်ဆောင်များမှာ ကြိုက်သလို နေလို့ရခြင်းကလဲ တစ်ချက်ဖြစ်နေပါတယ်…။
တက္ကသိုလ် အငွေ.အသက်အစစ်အမှန်ကို ပြန်လည်ခံစားရမယ်ဆိုတော့ ၀မ်းသာမိပါတယ်… အပြောမဟုတ်ပဲ တကယ်လုပ်ဖြစ်ပါစေလို. ဆုတောင်းရမှာပါပဲ……..
ကျုပ်အကြိမ်ကြိမ်ေ၇းခဲ့ဖူးတဲ့.. ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးကိစ္စ.. ပြန်ရေးရမယ်..
ပျော်ပျော်ပါးပါး.. အုပ်မြစ်ချပြီး ..ပြန်ဆောက်သင့်တယ်..
ပြီးတော့.. သမဂ္ဂနဲ့တက္ကသိုလ်ကို ဖျက်စီးခဲ့သူတွေက.. ပြန်တောင်းပန်သင့်တယ်..။
လက်ရှိသမဂ္ဂနဲ့.. တာဝန်ရှိသူတွေကလည်း ကျေအေးပြီး အလုပ်တူတူတွဲလုပ်သင့်ပါတယ်..
ယူအက်စ်တက္ကသိုလ်တွေမှာ.. ဆရာလုပ်နေတဲ့.. မြန်မာဇာတိနွယ်တွေရှိပါတယ်..။
သူတို့ကို အကူအညီတောင်းပြီး.. ဆရာတွေပြန်ခေါ်ရင်း.. တက္ကသိုလ်ဘ၀ မြှင့်သွားရမှာပါ…
ရင်ကော့ ခေါင်းမော့ပြီး သွားနိုင်တဲ့ ဘ၀ကို
ဟုတ်ပါလေ့ဗျာ… အဲဒီအခြေအနေမျိုး ကြားခွင့်လေးရချင်နေမိတာပါ…
ကိုကျော်ပြောခဲ့သလို… ဆယ်နှစ် နဲ့ ရနိုင်မလား….။
စာအုပ်နီလေးကိုင်ပြီးကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ခေါင်းမော့သွားနိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်ကတိုးရစ်ခေတ်ကို ရောက်တော့မယ်ထင်ပ့ါ။
ဟိုးးးးး တစ်ချိန်ကိုလိုနီခေတ်က သင်တဲ့ ကျွန်ပညာရေးဆိုတာ သခင်တွေအများကြီးမွေးထုတ်ပေးနိုင်တယ်နော်….
အခု ကျနော်တို့ သင်ရတဲ့ သခင်ပညာရေးကတော့ ကျွန်တွေ အများကြီး မွေးထုတ်ပေးနေတယ်ဗျ
ဟုတ်ပါတယ်ကိုခိုင်ရေ…ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်ရဲ့ လွတ်လပ်ရေးသမိုင်းအစ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတာကို သမိုင်းထဲက ထုတ်ပယ်ပြစ်လို့မရပါဘူး…ကျနော်တို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့အတွက် အားလုံးရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားတွေကို သိသာထင်ရှားအောင်ဖေါ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါပြီ။
ဟုတ်ပါတယ် ကိုသုညရေ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ကိုအမြန်ဆုံး ပြန်လည်တည်ဆောက်
ဖို့ဆန္ဒ ပြုပါတယ်ခင်ဗျာ …….